Ady & Fifandirana · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Jolay, 2012
Afrika Mainty 27 Jolay 2012
"Many people believed that Mali would be absent from the London Games because of the political and security situation in our country .. But we will definitely be in London and our goal is to prove to the whole world that in spite of our struggles, our country is still standing." - Malian National Olympic Committee President
Palestina: Mahatsiaro Ilay Mpanao Sariitatra Naji Al Ali
Marihana androany, [ 22 Jolay] ny faha-25 taona namonoana ilay mpanao sariitatra politika Palestianiana Naji Al Ali, malaza amin'ny tsikera ataony amin'ny fitondrana Arabo mpanao didy jadona sy i Isiraely izy. Teraka tao amin'ny tanàna kely Al-Shajara i Al Ali tamin'ny taona 1936 na ny taona 1937. Nandritra ny adin'i Arabo-Isiraely tamin'ny taona 1948, izay...
India: Fifandonana Ara-poko Ao Assam
Azia Atsimo 25 Jolay 2012
Namono olona 32 raha kely ary nandratràna maro hafa ny ady teo amin'ireo foko Bodo zanatany sy ireo voanjo miozolmana tao amin'ny fanjakan'i Assam. Manodidina ny 70.000 ireo mponina no nandositra ny toeram-ponenan-dry zareo hatramin'ny nipoahan'ny herisetra ary nialokaloka any amin'ireo toby vonjimaika. Raha kely dia tanana 60 avy amin'ny andaniny sy ny ankilany Bodo sy Miozolmana tao amin'ny distrikan'i Kokrajhar sy Chirang no voaroba sy voadoro.
Arzantina: Miteraka Adihevitra Ilay Lahatsarin'ny Lalao Olympika Tany Amin'ireo Nosy Malouines
Arzantina 23 Jolay 2012
Raha mikarakara ny Lalao Olaimpika 2012 any Londona i Arzantina, nisy fanambarana nataon'ny Filoha sy noraketina an-dahatsary tany amin'ireo Nosy Malouines niteraka adihevitra be miaraka amin'ny fehezanteny: "Raha hifaninana any amin'ny tany Anglisy isika, manazatra tena amin'ny tany Arzantina."
Lahatsary: Internet Society Miresaka Ny Fahalalahana Miteny Sy Ny Sivana Iraisam-pirenena Eny Anivon'ny Aterineto
Handresy manoloana ireo fitaovana fanaraha-maso vaovao ve ny teknolojian'ny tsy fitononana anarana? Ary hampiroborobo ny demaokrasia va re ny teknolojia finday - sa hitarika bebe kokoa ho any amin'ny fihazàna sy fanaraha-maso misimisy kokoa? Resadresaka iray teo Washington, DC ny 25 Jona 2012 niarahana taminà mafàna fo 6 avy any Syria, India, Burkina Faso, Kambodza, Venezoela sy Azerbaijan no niezaka hamaly ireo fanontaniana ireo.
Iran: “Raha Maty Misy Mamono i Bashar, Ny Fitondrana Iraniana Dia Hiantso Azy Ho Maritiora”
Narahan'ireo Iraniana mpitoraka bilaogy hadrohadro ny fanehoan-keviny tamin'ilay fanafihan'ny Syriana mpanohitra tao Damaskaosy sy ny fanapoahana baomba izay nahafaty ireo tomponandraikitra ambony telo amin'ny fiarovana ny fitondran'ny Filoha Syriana Bashar Al Assad. Tsara ny fifandraisana eo amin'i Iran sy Syria ary dia nanàla azy tokoa ireo vahoaka amin'ny mety ho fiantraikan'ny fialàn'i Al Assad eo amin'ny fitondrana, taorian'ny 16 volana nisian'ny revolisiona mivaivay tao Syria.